Nzira dzekudziya dzakajairwa, semaboiler uye muchina wekupisa anopisa marasha, mafuta kana zvimwe zvinhu, kazhinji zvinouya nezvipingamupinyi zvakaita sekudzikama kwekudziya, kudhura kwakanyanya, maitiro akaomarara ekugadzirisa, kusvibiswa, uye nharaunda ine njodzi yebasa.
Induction thermal conductive mafuta hita-Inductive Fluid Heaters
Mashandiro ayo uye zvakanakira mukushandiswa kwayo:
Zvakanakira kushandisa Induction Fluid Heater
Kunyatso kudzora tembiricha yekushanda, mutengo wakaderera wekugadzirisa uye mukana wekupisa chero rudzi rwemvura kune chero tembiricha uye kudzvanywa ndezvimwe zvakanakira zvinounzwa neInductive Electrothermal Induction Heating Generator (kana Inductive Heater yemvura) inogadzirwa neHLQ.
Uchishandisa iyo musimboti weiyo magineti induction kupisa, muInduction Heater yekupisa kwemvura inogadzirwa mumadziro ekutenderera kwemachubhu esimbi isina tsvina. Mvura inotenderera nemachubhu aya inobvisa kupisa ikoko, uko kunoshandiswa mukuita.
Aya mabhenefiti, akasanganiswa nedhizaini chaiyo yemutengi wega wega uye iyo yakasarudzika durability zvimiro zvesimbi isina tsvina, inoita iyo Inductive Heater yezvinwiwa zvisingaite kugadzirisa, pasina chikonzero chekuchinja chero chinhu chekudziya mukati mehupenyu hunobatsira. . Iyo Inductive Heater yezvinwiwa yakabvumira mapurojekiti ekudziya ayo akange asingashande nedzimwe nzira dzemagetsi kana kwete, uye mazana awo atove kushandiswa.
Iyo Inductive Heater yezvinwiwa, kunyangwe nekushandisa simba remagetsi kugadzira kupisa, mune akawanda maapplication akazviratidza seyakanyanya kunaka sarudzo pane yekushanda ekudziya masisitimu nemafuta emafuta kana gasi rechisikigo, zvakanyanya nekuda kwekusashanda zvakanaka kuri muhurongwa hwekupisa kupisa uye kudiwa kwekugara uchichengetedza.
Muchidimbu, iyo Inductive Electrothermal Induction Heater ine zvinotevera zvakanakira:
• Sistimu inoshanda yakaoma uye inotonhodzwa zvechisikigo.
• Kunyatso kudzora tembiricha yekushanda.
• Kunenge kuwanika kwekukurumidza kwekupisa paunenge uchipa simba Inductive Heater, nekuda kwekuderera kwayo kwekushisa, kubvisa nguva yakareba yekupisa inofanirwa kune mamwe maitiro ekupisa kuti asvike kutonhora kwehurumende.
• Kubudirira kwepamusoro nemigumisiro yekuchengetedza simba.
• High power factor (0.96 kusvika 0.99).
• Kushanda nekupisa kwakanyanya uye kumanikidzika.
• Kubviswa kwezvinopisa zvinopisa.
• Kuchengetedzwa kwekushanda kwese nekuda kwekuparadzaniswa kwemuviri pakati pehita uye network network.
• Mutengo wekuchengetedza haupo.
• Mhinduro dzinokurumidza kushanduka kwekushisa (low thermal inertia).
• Musiyano wetembiricha yemumadziro - mvura yakadzikira zvakanyanya, kudzivirira chero rudzi rwekutsemuka kana kushatisa kwemvura.
• Kururama uye kufanana kwekushisa mukati memvura yose uye kunaka kwemaitiro ekuchengetedza kupisa nguva dzose.
• Kubviswa kwemitengo yese yekugadzirisa, kuisa uye zvibvumirano zvehukama kana zvichienzaniswa nemabhoilers emuputi.
• Kuchengetedzwa kwese kwemushandisi uye maitiro ese.
• Wana nzvimbo nekuda kwekuvakwa kwakaomarara kweInductive Heater.
• Kupisa kwakananga kwemvura pasina kushandiswa kwekupisa.
• Nekuda kwehurongwa hwekushanda, iyo hita inopesana nekusvibisa.
• Kusununguka kubva mukugadzira zvisaririra mukudziya kwakananga kwemvura inopisa, nekuda kwekushomeka kweoxidation.
• Mukushanda iyo inductive hita haina ruzha zvachose.
• Kureruka uye kudhura kwekuisa.
Categories Technologies Tags tenga induction fluid hita, Induction Fluid Heater, induction fluid hita mutengo, induction fluid pipeline hita, induction heat thermal fluid pombi, induction kupisa pombi yemafuta, induction heat pipeline, induction kupisa thermal conductive mafuta, induction thermal fluid hita, Inductive Fluid Heater, thermal conductive mafuta pombi kupisa, thermal fluid pipeline hita Post navigation